Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Neves, Coutinho, Origi, Williams, Phillips, Digne, Gomez, Haaland
[ May 22, 2022 ] Manchester City 3-2 Aston Villa: City oo qaaday Horyaalka Premier League-ga	Wararka Ciyaaraha
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa Kala iibsiga: Neves, Coutinho, Origi, Williams, Phillips, Digne, Gomez, Haaland
January 6, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United waxaa ka go’an inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Portugal Ruben Neves, oo 24 jir ah, bishaan. (Sun)
Tababaraha Aston Villa Steven Gerrard ayaa si shaqsi ah u wacay khadka dhexe ee Barcelona Philippe Coutinho, kaasoo ka soo garab ciyaaray Liverpool , isagoo ka dalbaday inuu amaah ugu biiro Villa Park 29 jirka reer Brazil. (Mirror)
agaasimaha isboortiga Lazio ayaa wadahadalo la furay kooxda Liverpool oo ku aadan weeraryahanka reer Belgium Divock Origi, iyadoo Reds dooneyso inay iska iibiso 26-sano jir ah si looga fogaado Bixitaankiisq beeca xorta ah ee June. (LazioNews24)
Liverpool ayaa laga yaabaa inay u ogolaato daafaca Wales Neco Williams, oo 20 sano jir ah, iyo daafaca dhexe ee Ingariiska Nathaniel Phillips, 24 sano jir ah, inay ka tagaan kooxda suuqa Janaayo. (Sky Sports)
Bayern Munich ayaa xiddiga Barcelona Ousmane Dembele, oo 24 jir ah ka dhigi doonta bartilmaameedka mudnaanta leh si ay u buuxiso booska garabka France ee Kingsley Coman haddii 25 jirkaan uu ka tago Allianz Arena dhamaadka xilli ciyaareedkan. (L’Equipe)
Daafaca bidix ee Everton Lucas Digne, oo 28 jir ah, ayay u badan tahay inuu u dhaqaaqo koox kale oo Premier League ah, laakiin Newcastle maahan dookh uu u leeyahay xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska. (Fabrizio Romano)
West Ham ayaa wadahadalo kula jirta Digne, laakiin mushaharkiisa todobaadlaha ah ee £ 100,000 ayaa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto kooxda reer London. (Dailymail)
Chelsea ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo daafaca dambeedka midig ee Barcelona iyo Mareykanka Sergino Dest, oo 21 jir ah, si ay ugu bedelaan Digne oo si dhow loola xiriirinayo. (Star)
Everton ayaa Newcastle iyo Arsenal kula biirtay raadinta 24 jirka khadka dhexe ee kooxda Lyon iyo xulka Brazil ee Bruno Guimaraes. (Evening Standard)
Newcastle ayaa u soo bandhigtay daafaca dhexe ee France Samuel Umtiti oo 28 jir ah, heshiis amaah ah oo ay ku jirto ikhtiyaar ay ku iibsan karto. (Dailymail)
Aston Villa wax fursad ah uma haysato inay la soo wareegto 24 jirka daafaca dhexe ee Liverpool iyo England Joe Gomez. (The athletic)
Villa ayaa xiisaynaysa daafaca bidix ee Bologna Aaron Hickey, iyadoo 19-jirka reer Scotland la sheegay inay si fiican u jecel yihiin shaqaalaha tababarka ee Steven Gerrard. (Birmingham Mail)
Borussia Dortmund ayaa go’aan ka gaari doonta mustaqbalka 21 jirka weerarka uga ciyaara Norway Erling Braut Haaland “toddobaadyada soo socda”. (Dailymail)
Ilaa 11 ciyaaryahan ayaa doonaya inay ka tagaan Manchester United , iyagoo ka niyad jabay nolosha Old Trafford iyo xanta ku saabsan dhibaatada qolka labiska. (Mirror)
Manchester United ayaa isku dayaysa inay lasoo saxiixato daafaca reer France Dan-Axel Zagadou, oo 22 jir ah, kaasoo beeca xorta ah xagaaga kaga imaanaya Borussia Dortmund. (Football Mercato)
Manchester City 3-2 Aston Villa: City oo qaaday Horyaalka Premier League-ga